Cottages For Rent in Halifax, West Yorkshire
Okwangoku ngakwindlu ekhanyayo ekhanyayo elula nefunwa lilali yaseShelf kufutshane neivenkile zalapha ekhaya kunye nenkonzo yesiqhelo yenkonzo yebhasi eya eHalifax, Bradford naseLeeds. Ukubonelela ngegesi yokufudumeza iphakathi kunye ne-UPVC iFleather Glitter.Yenziwe inguqu rhoqo kwiikhaphethi kunye negumbi lokuhlambela elingaphakathi ...
Igumbi lokulala eli-2 elisekwe embindini welali eddenden. Yenziwe entsha, igumbi lokuhlambela nekhitshi namhlanje. Indawo enqweneleka kakhulu.Iikhaphethi ezintsha xa zizonke. Ingafanelana nesibini esitshatileyo. Umgaqo webhasi wasekhaya iivenkile zepaki zengingqi kude. Okuninzi okufunwayo emva kwendawoIArhente yeNdawo ekuthengiswa kuyo kwi-Intanethi yivoti ...
Ilitye elithandekayo elakhiweyo kwikona yethala leetafile elibekwe kule nto inqwenelekayo kwaye ifunwa kakhulu yindawo enembono zomgama omde ukuya ngaphambili, yaphuculwa yinkcitho ephindwe kabini. Ilawulwa ngokugqibeleleyo. Uvavanyo lwangaphakathi kufuneka uluxabise lo mbeko lwepropathi enikezelweyo ...
Indlu yethala elikhohlisayo eliphakathi elineyona ndawo ifanelekileyo ngaphakathi kule ndawo ithathelwa ingqalelo kakhulu kwaye ifunwa kakhulu yindawo yokuhlala, kufutshane neendawo ezilalini kunye nokufikelela okulula kwevenkile kunye neendlela eziqhelekileyo zebhasi zedolophu. Ifakwe kumgangatho olungileyo lonke kwaye iyazuza kwigesi ...
Ifumaneka nge zero zediphozithi.Le yindawo enikezelwe kakuhle kwaye ekhohlisayo yindawo yokuhlala yaphantsi, enendawo yokuphumla enkulu, ikhitshi, igumbi lokulala kunye negumbi lokulala, izibonelelo zepropati ukusuka ekuphekeni kwegesi kunye nokupaka indawo yokuhlala, ukujonga kunconyelwe kakhulu.
Le ndlwana 2 ibhedi intle ibekwe kule ndawo idumileyo yelali, inikezela ngendawo yokuhlala efanelekileyo egcinwe ngokufudumeza igesi kunye nokufudumeza kabini. Indawo yokuhlala ibandakanya ukungena ngaphakathi, kwigumbi lokuphumla, ikhitshi, igumbi elangeni, amagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlambela, ipatio encinci ngaphambili kunye negadi ngasemva. I-Int ...
Set in a peaceful conservation area, this charming stone-built terraced cottage is tucked away from the main road with open views to the front elevation.Ground floorEntrance HallDining KitchenSitting Roomfirst floorBedroom 1Bedroom 2Study (access to hobbies room / occasional bedroom)Bathroomsecond f...
Halifax in West Yorkshire, Hx4 9pu
Published by Vg Estate Agent
A delightful and charming character cottage, situated in a quiet and extremely pleasant cobbled court yard and briefly comprises:Ground Floor- entrance hall- spacious lounge with feature chimney breast- under stairs storage- steps leading down into a recently refurbished fitted kitchen (inc. Electri...
Halifax in West Yorkshire, Hx3 0rx
Published by Ljf Property Management